Apple TV + waxaa lagu qiyaasaa inuu horey usii dhaafay 40 milyan oo macaamiil | Waxaan ka socdaa mac
Apple TV + waxaa lagu qiyaasaa inuu horey usii dhaafay 40 milyan oo macaamiil ah
Qiyaasta tirada macaamiisha ee Apple TV + la heli karo ayaa la daabacay, waxayna dhigaayaan tiro ka badan tan 40 malaayiin dabayaaqadii sanadkii hore. Aniga daacad ahaan waxay umuuqdaan kuwo aad uyar, kuwo aad uyar.
In yar oo shirkad ah oo bilyan iphone firfircoon ku leh meeraha. Hal bilyan oo isticmaale Apple ah, oo 40 ka mid ah ay daawadaan Apple TV +. Xaqiiqdiina kuwa ka mid ah macaamiisha barta, inta badan intooda badani wali waxay leeyihiin dhiirrigelinta sanadka bilaashka ah haddii aad iibsatay qalab cusub labadii sano ee la soo dhaafay.
Sida lagu sheegay warbixin uu daabacay Newsweek, Falanqaynta Falanqaynta, shirkad ku takhasustay falanqaynta suuqa, waxay ku qiyaaseysaa in macaamiisha ku jira adeegga fiidiyowga ee qulqulaya Apple ay dhaaftay 40 milyan dhammaadka 2020. Tani waxay ka dhigan tahay koritaanka in ka badan 6 milyan oo isticmaale marka la barbar dhigo tirooyinka 2019.
Warbixinta ayaa sidoo kale xustay in, sida lagu sheegay daraasad dhowaan kala duwan, illaa saddex-meelood-meel Apple TV + macaamiisha ayaa sii wadaya inay helaan adeegga bilaashka ah, iyada oo ay ugu wacan tahay dhiirrigelinta Apple ee sanadka oo bilaash ah barxaddeeda haddii aad soo iibsato qalab cusub.
Apple TV + ma aysan shaacin waxa ay tahay tirada macaamiisheeda hadda, laakiin sida laga soo xigtay Falanqaynta Ampere, barnaamijka ayaa lahaa 33,6 malaayiin isticmaaleyaasha dhammaadka 2019, waxaana lagu qiyaasaa inay gaari lahayd 40 milyan dhammaadka sannadka 2020.
Qaar badan oo ka mid ah macaamiishaada ayaa weli ah kuwo aan lacag la siinin
Kordhinta tirada macaamiisha waxaa lagu sharaxay xaqiiqda ah in Apple sii sanad Apple TV + oo iibsanaya qalab cusub. Waxaa lagu qiyaasay in ka badan seddex meelood shan meelood meel aysan bixinaynin adeegga.
Way adag tahay in si sax ah loo ogaado in qiyaasahani ay aad u sax yihiin iyo in kale. Apple waligeed ma sharraxdo tirada saxda ah ee macaamiisha mid kasta oo ka mid ah adeegyadeeda shaqsiyadeed sida Apple TV +, Apple Music, ama Apple Arcade. Si kastaba ha noqotee, waxay dhawaan shaaca ka qaaday in shirkaddu ay dhaaftay tan 660 malaayiin ee ka mid noqoshada lacag bixinta ee lagu daro dhammaan adeegyadooda.
Marka la soo koobo, haddii tirooyinku run yihiin oo Apple TV + ay ka badan yihiin 40 milyan oo macmiil ah (oo bixinaya ama aan bixin), weli wey ka hooseysaa labada weyn, Disney + y Netflix, oo dhaaftay 100 milyan iyo 200 milyan oo macaamiil ah, siday u kala horreeyaan, kuwaasna waa la bixiyaa, in kastoo qaar ka mid ah xisaabaadka Netflix la wadaago. Hadda
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Apple TV + waxaa lagu qiyaasaa inuu horey usii dhaafay 40 milyan oo macaamiil ah
Heerka sare ee 'MacBook Pro' waxaa la wareegaya iPad Pro cusub oo wata 'M1'
Kaydka AirTags ee ku yaal Apple Store wuu xasilloon yahay